January 2, 2021 – Kichuu
Oduu sinbirtuu Jaal#MARROON Du’ee ka’e!! Kaleessa Amajji 1 irratti guyyaa eebba Jajjabee Zoonii lixaati. Yoo iji kee sirriitti argeef eenyuun argaa jirta? ሱዳን- ” የአማራ ክልል መሬት የእኔ ነው” የአማራ ክልል ባለስልጣናትና ሚዲያ-“የትግራይ ክልል መሬት [Read More]
Ummanni beenishanguul gumuz humna adda amaaran daraara ulfaatan irra ga’aa jira
Ummanni beenishanguul gumuz humna adda amaaran daraara ulfaatan irra ga’aa jira. Ummaanni kuun yeroo hedduu humnaa kana ajjeefamuu,hidhaamu fi qa’ee isaa irra buqa’aa turu isa gabaasa turuun keenya ni yaadataama. Ammas garuu qama sagalee ta’uu [Read More]
Breaking News! Daandiwwan Itoophiyaa fi Eritiriya wal quunnamsiisan karaa lamaan cufamuun mirkanaa’eera.
#Breaking_News! Daandiwwan Itoophiyaa fi Eritiriya wal quunnamsiisan karaa lamaan cufamuun mirkanaa’eera. Daandiwwan kunis karaa magaalota Shiraaroo fi Zalambassaa yoo tahan yeroo ammaa lolli guddaan humnoota Tigraay fi loltoota Eritiriya gidduutti taasifaamaa jira. Daandiwwan kuni [Read More]
Oduu Naqamtee Ajjeechaan mana amantii Waldaa Araaraa keessatti Kan raawwate, humna addaa naannoo Amaaraatiin ta’u dhaabbati mirga namoomaa Itoophiyaa saaxileera!! Oromoon humnaa fi mootummaa nagaa isaa tiksu hin qabu! Ummanni keenya qe’ee isaa keessatti [Read More]
El Burhan: Sudan army redeployed at Ethiopian border Chairman of Sudan’s Sovereign Council, Lt Gen Abdelfattah El Burhan, announced that the Sudan Armed Forces (SAF) have been redeployed at Sudan’s border with neighbouring Ethiopia, which [Read More]
Things Getting Complicated for Ethiopia Compiled by EEPA BRUSSELS (IDN) – Multiple sources state that Eritrean soldiers are blocked in attempts to leave Tigray. Heavy fighting between Ethiopia National Defence Forces (ENDF) and Tigray Defence [Read More]
Biltsiginnaan Magaalaa Finfinnee keessatti Taapeellaa Fb namaa report godhaa jedhu Addabaabaayii gurguddaa irratti maxansitee Fb namoota dhiibbaa uumuu danda’anii akka Report godhan gaafataa jirti. Hojii Abiy akka Lammaan wal dhabr hojjate keessa Raayyaa Fb [Read More]
Dan Simpson: U.S. should avoid con­flict in Ethi­o­pia DAN SIMPSON Pittsburgh Post-Gazette (post-gazette)—Ethiopia has once again become a bone of contention in northeast Africa. This time it seems to be based on a simple civil [Read More]